တရုတ်သံရုံးကို နေတိုးအဖွဲ့က ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကို တရုတ်နိုင်ငံက ဘယ်သောအခါမှ မေ့လျော့မည်မဟုတ်ဟု ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပြော - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ကျောက်လိကျန်းအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်)
တရုတ်ပြည်သူများအနေဖြင့် ၁၉၉၉ ခုနှစ်က ဘယ်လ်ဂိတ်မြို့ရှိ တရုတ်သံရုံးကို နေတိုး (NATO) အဖွဲ့၏ ရက်စက်သော ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကို ဘယ်သောအခါမှ မေ့လျော့မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် သမိုင်းဝင် ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုမျိုး ထပ်မံဖြစ်ပွားရန် ဘယ်သောအခါမှ ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ကျောက်လိကျန်းက မေ ၆ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။၁၉၉၉ ခုနှစ် မေ ၇ ရက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဦးဆောင်သော နေတိုးတပ်ဖွဲ့က ဘယ်လ်ဂရိတ်မြို့ရှိ တရုတ်သံရုံးကို ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ တရုတ် သတင်းထောက် ၃ ဦးသေဆုံး၍ တရုတ်သံတမန် ၂၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်နှင့် ဆက်စပ်သောမေးခွန်းအား ကျောက်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ မှတ်ချက်ပြုဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“နေတိုးက ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရမယ့်အစား အမှန်တကယ်တွင်မူ နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ချိုးဖောက်လျက်ရှိပြီး အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အကြောင်းမဲ့သက်သက် စစ်ပွဲများဆင်နွှဲကာ ကမ္ဘာကြီးနှင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အားလျော့နည်းစေသလို အပြစ်မဲ့အရပ်သားများစွာကို နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးစေပါတယ်” ဟု ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုသည်။
နေတိုးအဖွဲ့အနေဖြင့် “အကြွင်းမဲ့လုံခြုံရေး” ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စစ်အေးခေတ်ပြီးနောက် အရှေ့ဘက်သို့ချဲ့ထွင်ခြင်း လှိုင်းကြီးငါးခုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းမှာ ဥရောပအတွက် ဘေးကင်းမှုမရှိသလို ရုရှားနှင့် ယူကရိန်းကြား ပဋိပက္ခမျိုးစေ့ စိုက်ပျိုးလိုက်ခြင်း၊ ဥရောပတိုက်တွင် စစ်ပွဲစိုးမိုးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
စစ်အေးခေတ် ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိပြည်သူများ၏ ပြင်းပြသောဘုံဆန္ဒသဘောထားမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျောက်က ဆိုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဦးဆောင်သော နေတိုးအဖွဲ့သည် လိုအပ်သောချိန်ညှိမှုများ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ စစ်အေးခေတ်သဘောထားကို စွန့်လွှတ်သင့်ကြောင်းနှင့် ဥရောပ၊ အာရှပစိဖိတ်နှင့် ကမ္ဘာကြီးတွင် အုပ်စုဖွဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်စခြင်းနှင့် တင်းမာမှုများ ဖန်တီးခြင်းကို ရပ်တန့်သင့်ကြောင်း ကျောက်က ပြောခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် နေတိုးတို့သည် ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ခိုင်မာသောကူညီပံ့ပိုးမှုများ ပေးအပ်ရန် အပြုသဘောဆောင်သည့်ခြေလှမ်းများ ချမှတ်သင့်ကြောင်းလည်း ကျောက်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
China will never forget NATO’s bombing of Chinese embassy: spokesperson
BEIJING, May6(Xinhua) — The Chinese people will never forget NATO’s barbaric atrocities of bombing the Chinese embassy in Belgrade in 1999, and will never allow the historical tragedy to be repeated, Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian said Friday.
“The NATO claims to beadefensive organization, but it in fact has repeatedly violated international law and wantonly waged wars against sovereign countries, undermining world and regional peace and killing and displacingalarge number of innocent civilians,” said the spokesperson.
NATO pursues “absolute security” and has engaged in five consecutive waves of eastward expansion after the Cold War, which did not make Europe safer, but rather sowed the seed of conflict between Russia and Ukraine, reigniting war on the European continent, he said.
The United States and NATO should take concrete steps to make solid contributions to world peace, stability and development, Zhao added. ■
Photo : Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian atapress briefing on Sept. 10, 2020. (Picture from the website of Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China)